उत्तर पाना सिर्जना गर्नुहोस्
उत्तर पाना नि: शुल्क सिर्जना गर्नुहोस्
तुरून्त OMR उत्तर पुस्तिका प्रिन्ट गर्न तैयार गर्नुहोस्
नि: शुल्क अनलाइन अनुप्रयोग उत्तर पाना सिर्जना गर्न, ओएमआर पाना, बहु विकल्प उत्तर पाना नि: शुल्क
प्रश्नहरूको संख्या छनौट गरेर अनुकूलन MCQ उत्तर पुस्तिका सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं questions० प्रश्न ओएमआर पाना, १०० प्रश्न ओएमआर पाना, १ questions० प्रश्न ओएमआर पाना, २०० प्रश्न ओएमआर पाना डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
OMR पाना PDF वा PNG ढाँचामा बचत गर्नुहोस्
कालो एक्वा एक्वामारिन निलो BlueViolet लाइम क्रिमसन गाढा निलो गाढा हरियो DarkOrange DarkSalmon फुचिया इंडिगो रातो टिल
OMR पाना सिर्जना गर्नुहोस्
हाम्रो उत्पादनको साथ तपाईको अनुभवलाई कसरी दर्जा दिनुहुन्छ
कृपया तपाईंको उत्तर विस्तार गर्नुहोस्
गलत रूपमा सिर्जना गरिएको
पर्याप्त कार्यक्षमता छैन
सेवा अनुपलब्ध थियो
कसरी प्रयोग गर्ने यो स्पष्ट छैन
तपाईंको आफ्नै कारण:
1000 वर्ण अधिकतम
हामीलाई तपाईंको प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
उत्तर पाना स्क्यान गर्नुहोस् ग्रेड क्यालकुलेटर
पाना सिर्जना गर्नुहोस् पाना स्क्यान गर्नुहोस् इजि ग्रेडर
Aspose.OMR उत्तर पाना सिर्जना गर्नुहोस् एक नि: शुल्क अनलाइन अनुप्रयोग हो जसले कुनै पनि उपकरण र प्लेटफर्मबाट अनुकूलित उत्तर पाना फारमहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। उत्तर पानाहरू परीक्षा, परीक्षा, क्विज वा असाइनमेन्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ छिटो र सजिलो मार्कि students विद्यार्थीहरूको उत्तरहरूको लागि। तपाईं उत्तर पाना बचत गर्न सक्नुहुन्छ PDF वा PNG ढाँचामा। Aspose.OMR स्क्यान उत्तर पाना प्रयोग गर्नुहोस् फोटो र भरिएका फारामहरूको स्क्यानबाट परिणाम प्राप्त गर्नका लागि।
यो नि: शुल्क आवेदन कुनै पनि प्रकारको ओएमआर पाना जस्तै प्रवेश फारामहरू, फिडब्याकहरू, मूल्या choice्कनहरू, बहु विकल्प छनौट परीक्षाको निर्माणको लागि हो। विद्यार्थीहरूले तिनीहरूका उत्तरहरू, वा अन्य व्यक्तिगत जानकारी मार्क डार्क लगाएर, जुन प्रि-प्रिन्ट गरिएको शिटमा चिन्ह लगाईन्छ। यसको अत्यन्त कम त्रुटि दर, कम लागत र प्रयोगको सजिलोको कारण, OMR भोटहरू पछाडिको लोकप्रिय तरीका हो। हाम्रो सफ्टवेयर द्वारा निर्मित सबै OMR फारमहरू मुद्रण योग्य छ, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो ग्राहकहरु द्वारा डाटा भर्नका लागि अफलाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पानाहरू प्रिन्ट गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनकि तिनीहरू डिजाइन गरिएको थियो, त्यसैले यस उद्देश्यका लागि PDF ढाँचा उत्तम विकल्प हो।
OMR पाना कसरी बनाउने
उत्तर पानाका लागि प्रश्नहरूको संख्या चयन गर्नुहोस्।
फाईल ढाँचा छनौट गर्नुहोस्: PNG वा PDF।
उत्पादन प्रक्रिया सुरू गर्न "OMR पाना सिर्जना गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
उत्तर पाना डाउनलोड गर्न "डाउनलोड" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
अब तपाईं OMR पानाहरू प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई उत्तरदाताहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यस पछि भरिएका फारामहरू पढ्न OMR स्क्यान उत्तर पाना अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस्।
Aspose.OMR उत्तर पुस्तिका बनाउनुहोस्
OMR टेम्पलेट प्रिन्ट गर्न तैयार गर्नुहोस्
लोकप्रिय कार्यहरूको लागि पूर्वनिर्धारित OMR टेम्पलेटहरू सिर्जना गर्नुहोस् (उत्तर पानाहरू, सर्वेक्षणहरू, परीक्षणहरू, बबल शिटहरू)
समर्थित OMR टेम्पलेट्स: OMR उत्तर पाना, OMR सर्वेक्षण, OMR परीक्षण
O OMR छवि कसरी सिर्जना गर्ने?
OMR छवि सिर्जना गर्नु बटनहरू क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् जत्तिकै सरल छ। केही प्रकारका प्रकारहरूका लागि, तपाईं छविहरू अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ।
O OMR छविहरू नि: शुल्क सिर्जना गर्दैछ?
हाम्रो OMR अनुप्रयोगहरू नि: शुल्क छन्। तपाईले चाहानु भएको अनुसार यसलाई स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
Created सिर्जना गरिएको OMR छविहरूको साथ के गर्ने?
तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्नुहोस् र तपाईंको विद्यार्थी, ग्राहक वा अन्य उत्तरदाताहरू लाई दिनुहोस्। त्यसोभए तस्बिर लिनुहोस् वा भरिएका फारामहरू लिनुहोस् र छविहरू पहिचान गर्न ओएमआर स्क्यान अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
I के म लिनक्स, म्याक ओएस वा एन्ड्रोइडमा ओएमआर छविहरू सिर्जना गर्न सक्दछु?
OMR छवि निर्माता अनलाइन काम गर्दछ र कुनै सफ्टवेयर स्थापनाको आवश्यक पर्दैन।
OMR टेम्पलेट अनुकूलित गर्नुहोस् र "सिर्जना गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं ओएमआर छवि सक्दो चाँडो जेनरेशन पूर्ण भए पछि पाउनुहुनेछ.
यसले विन्डोज, म्याक, एन्ड्रोइड र आईओएस सहित सबै प्लेटफार्महरूबाट काम गर्दछ। सबै फाईलहरू हाम्रो सर्वरहरूमा प्रक्रियामा छन्। तपाइँको लागि कुनै प्लगइन वा सफ्टवेयर स्थापना आवश्यक छैन.
द्वारा संचालित Aspose.OMR. सबै फाईलहरू एस्पोज एपीआई को उपयोग गरेर प्रशोधन गरिन्छ, जुन ११ Fort देशहरुमा धेरै फोरचुन १०० कम्पनीहरु द्वारा प्रयोग भइरहेको छ।.